आजबाट आन्तरिक उडानमा यात्रुले पालना गर्नुपर्ने नियमहरु केके छन् त ? - Samadarshi Sanchar
आजबाट आन्तरिक उडानमा यात्रुले पालना गर्नुपर्ने नियमहरु केके छन् त ?
, सोमबार, ०५ असोज, २०७७, बिहानको ०४:०२ बजे
काठमाडौं । चैत १० गतेदेखि बन्द भएको आन्तरिक हवाई उडान आजबाट सुचारु हुँदैछ । तर, यो समय साविकको जस्तै छैन । त्यसैले यसलाई ‘न्यू नर्मल’ भनिएको हो ।
अब एयरपोर्ट भित्रको प्रक्रियामा लाग्ने समय कम्तिमा आधा घण्टा लम्बिएको छ । त्यसकारण यात्रु जहाज उड्ने समयभन्दा कम्तिमा डेढ घण्टा अगाडी नै विमानस्थल पुग्नुपर्छ ।
निजी लगानीको वायुसेवा बुद्ध एयरले सोमबारबाट हवाई यात्रामा लागु हुने नियमलाई ‘पास मोडल’का रुपमा व्याख्या गरेको छ । पास (पीएएसएस) अर्थातः प्यासेन्जर, एयरपोर्ट, एयरक्राप्ट र स्टाफ ।
यी चार वटै क्षेत्रले उत्तिकै सचेतना अपनाउनु पर्ने गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा कम्पनीले सेफ्टी प्रोटोकलको विकास गरेका छन् ।
यात्रुले पालना गर्नुपर्ने नियम
· सबै यात्रुले एयरपोर्ट आउनु अगाडि मास्क लगाई हात स्यानिटाइज गर्नुपर्नेछ ।
· विमानस्थल भित्र कम्तिमा १ मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्नेछ ।
· इ-टिकेटबाट चेकइन हुनेछ ।
· आफ्नो व्यागेजसँगै लैजान पाइने छैन, महिलाको हृयाण्डक्यारी र ल्यापटप ब्यागबाहेक अन्य ब्याग विमान भित्रै लैजान निषेध गरिएको छ ।
· सबै यात्रुका लागि विमानस्थलमा दोहोरो तापक्रम चेकजाँच र स्यानिटाइजरको व्यवस्था गरिएको छ ।
· विमानभित्र हिँडडुल गर्न निषेध गरिएको छ ।
· शौचालय विमानस्थलमै प्रयोग गरि जहाज चढ्नुपर्नेछ ।
· कोभिड १९ को लक्षण देखिएको यात्रुलाई हवाई यात्रुलाई निषेध गरिएको छ ।
· मास्क र फेससील यात्रुले यात्रा अवधिभर लगाउनु पर्नेछ ।
विमान र कर्मचारीले अपनाउनुपर्ने नियम
· र्‍याम्प बसमा यात्रुलाई सामाजिक दूरी कायम गराई बसाउनु पर्नेछ ।
· ब्यागेज ट्रली, ट्रान्सपोर्ट भ्यान तथा अन्य सवारी साधन हरेक पटक प्रयोगपछि स्यानिटाइज गर्नु पर्नेछ ।
· पटक पटक प्रयोगमा आइरहने ढोकाका हृयाडल तथा स्ट्याण्डहरु पटक पटक स्यानिटाइज गर्नुपर्छ ।
· यात्रुलाई विमानभित्र र बाहिर लैजाँदा एक पटकमा चार जनालाई मात्र लैजानु पर्छ ।
· यात्रुहरुलाई फेससील वितरण गर्नुपर्नेछ ।
· हरेक उडानपछि विमानस्थललाई सरसफाई गर्नुपर्छ ।
· सबै कर्मचारीले अनिवार्य मास्क लगाई यात्रुसँग सामाजिक दूरी कायम गरी सेवा दिनु पर्नेछ ।
· हरेक कर्मचारीको दैनिक कार्यालय प्रवेशसँगै तापक्रम नाप गरिने भएको छ ।
· हरेक कर्मचारीलाई सुरक्षित सेवा सम्बन्धमा नियमित तालीम तथा आवश्यक सुरक्षा सामग्री प्रदान गरिने भएको छ ।